म मेयरकाे लागी तयारी छु
धरान निवासी विजय राई नेकपा १ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटी सदस्य हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका राईको जन्म वि.स.२०२७ साल असोज २४ गते विजयादशमीको दिन भएको हो । विजयदशीको दिन नै जन्मिएकाले उनको नाम नै विजय रहन गएको हो । उनी वुवा दान बहादुर राई आमा तारादेवी राईको कान्छो छोरा हुन्। मोरङ्को रंगेली साविकको बविया विर्ता गाविस वडा नम्बर २ मा भएको हो । उनको प्रारम्भिक मोरंङको वाहुनी जनता माविबाट भएको हो । उच्च शिक्षा महेन्द्र मोरङ विराटनगर, धरान, मास्टर भने त्रिभुवन युनिभर्ससिटी किर्तीपुरबाट एमविए उतीर्ण गरेका छन् ।२०३९ सालदेखि निरन्तर विद्यालय अध्ययनरत देखि नै अनेरास्ववियूमा संगठित भएर राजनीतिमा अघि वढेका हुन् ।अनेरास्वियु केन्द्रिय सचिवालय सदस्य (शैक्षिक विभाग प्रमुख), त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्ववियू सभापति,स्ववियु काउन्सिल संयोजक,त्रिवि सिनेटर,तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वकिय सचिव,नेपाल खेलकुद महासंघको संस्थापक उपाध्यक्ष हुदै अहिले भने भुगोलको राजनीतिमा धरानमा रहेर सक्रिय छन् । हाल नेकपा १ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटीको सदस्य भएर क्रियाशील छन् । उनै नेकपा प्रदेश सदस्य विजय राईसँग औजार दैनिकले गरेको कुराकानी ः–
जब म धरानको भुगोलमा काम गर्न आए । धरानको पाटीको कामलाई सहयोग गर्न म आएको हो । काम गर्ने शिलशिलामा सबै वडाहरुमा म पुगेको छु । धरानका युवा, विद्यार्थी, वुद्धिजीविहरु, खेलाडीहरु, मजदुरहरु, समृद्ध धरान भएको हेर्न चाहने समुहहरुसँग पटक–पटक छलफलहरु भएका छन् । सबै साथीहरुको आग्रह छ, ‘तपाईले धरानलाई सक्षम नेतृत्व दिन सक्नु हुन्छ’ भन्ने सुझाव आएकाले पाटीमा निरन्तर काम गरिहरको म इमान्दार कार्यकर्ता भएकाले साथीहरुको चाहनालाई शिरोधार्य गर्दछु ।
दशैं लागेको कसरी मनाउँदै हुनु हुन्छ ?
पाटी कमिटीका साथीभाईसँग भेटघाट,नजिक आइरहेको उप –निर्वाचनको चुनावी अभियानमा सरिक हुँदै दशै मनाउँदैछु ।
चाडपर्वसँगै उप निर्वाचनलाई किन जोड्दै हुनु हुन्छ ?
नेपालीहरुको मात्र महान चाड दशै,तिहार,छठ नजिक आइसकेकाले यी चाड पर्वहरु पनि मनाउनु पर्छ ।
हाम्रो चाड पर्वले विगतमा भएका तिता मिठा,मन मुटाब,केही असहमतिलाई पनि यस्ले सहजीकरण गर्ने हुनाले चाडहरुसँगै धरानवासीको लागि अर्को महान चाड जस्तै उप निर्वाचन नजिक आइरहेकोले पनि हाम्रो पाटी नेकपाको विरासतलाई वचाउन अनिवार्य भएकाले दशै र उपनिर्वाचनलाई यसपाली सँस –सगै लानु पर्ने वाध्यता छ ।
नेकपाको विरासत यसपाली पनि उप–विर्नाचनले जोगाउला त ?
निश्चित रुपमा पन्चायतकालदेखि नै धरानमा कम्युनिष्टले चुनाव जित्दै आइहरको छ । धरान कम्युनिष्टको गढ हो ।
वहुदलपछि पनि कम्युनिष्टहरुले नै एक छत्र विजय हासिल गरेको सवैलाई थाहै छ । यस अघिको चुनाबमा पनि वहुमत वडा सहित मेयर उप मेयर कम्युनिष्टले विजय हासिल गरेको हो । अवको उप –निर्वाचनमा पनि कम्यूनिष्टले जित्नै पर्दछ र जित्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यहीँ नै नेकपाको विरासत हो र मंशीर १४ गते हुने उप–निर्वाचनमा पनि यो विरासत कायमै रहनेछ ।
धरानमा उप निर्वाचनको तयारी चाहि कस्तो छ ?
–पाटी एकता भइसकेपछि धरान उपमहानगर कमिटी र सवै वडा कमिटीहरु निर्माण भइसकेको छ ।
टोल कमिटीहरु वन्ने क्रम जारी छ । केही टोल कमिटीहरु वनि सकेको र अरु टोल कमिटीहरु वन्ने क्रम जारी रहेको छ । सवै कमिटीका साथीहरु आगामी चुनावको तयारीमा छन् ।
उप–निर्वाचनमा उम्मेद्धवारको तयारी के छ त ?
धरानमा आफ्नो ढंगले आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।निर्वाचन आयोगको चुनावी कार्य तालिका आइसकेको छैन । मात्रै मंशीर १४ गते उप–निर्वाचन गर्ने भन्ने मात्रै हो । पाटीबाट पनि लिखित रुपमा चुनावी तयारीको लागि सर्कुलर आइसकेको छैन ।चुनावको लागि सवै पाटीको कमिटीहरुमा तयारी भईरहेको छ । पार्टी भित्र उम्मेद्धवारको विषयमा गहन ढंगले छलफल भएको छैन । चुनावी छलफल र भेटघाट वढिरहेको छ । उम्मेद्धवारको वारेमा माथिल्लो कमिटीबाट सर्कुलर आएपछि गहन छलफल हुने छ ।
उम्मेद्धवारीमा तपाईको चर्चा चल्दैछ,होइन ?
उम्मेद्धवारी वन्नु मेरो चाहाना त होइन । यति बेला धरानका सवै तहका जनताले मबाट आशा र भरोसा राख्नु भएको छ ।उहाँहरुको चाहनालाई मैले अस्वीकार गर्नु भएन । त्यसैको उपज मेरो उम्मेद्धवारीको चर्चा भएको होला ।
चर्चासँगै उम्मेद्धवारीको लागि तपाईको चाहाना चाहिँ के छ ?
जव म धरानको भुगोलमा काम गर्न आए । धरानको पाटीको कामलाई सहयोग गर्न म आएको हो । काम गर्ने शिलशिलामा सवै वडाहरुमा म पुगेको छु । धरानका युवा, विद्यार्थी, वुद्धिजीविहरु, खेलाडीहरु, मजदुरहरु, समृद्ध धरान भएको हेर्न चाहने समुहहरुसँग पटक–पटक छलफलहरु भएका छन् । सवै साथीहरुको आग्रह छ, ‘तपाईले धरानलाई सक्षम नेतृत्व दिन सक्नु हुन्छ’ भन्ने सुझाव आएकाले पाटीमा निरन्तर काम गरिहरको म इमान्दार कार्यकर्ता भएकाले साथीहरुको चाहनालाई शिरोधार्य गर्दछु ।
तर धरानको राजनीतिमा तपाई परिचति अनुहार होइन पनि भन्छन नी ?
हैन, यो परिचित अनुहार केलाई भन्ने ? धरानमा नै वसेर आफ्नो व्यवसाय गरेर धरानकै कमिटीमा काम गर्नेलाई परिचित अनुहार भन्ने हो भने म त्यसमा थोरै अपुरो भएको हुन सक्छु ।
सवैले सवैलाई चिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन् । तर मुलूकको परिवर्तनको आन्दोलनको अगुवाईमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने काममा म अरु भन्दा अगाडि नै छु । सवैले चिनेको अनुहार खोज्ने हो भने चिनिएको कलाकारलाई नै ल्याए झनै उतम ।कुनै कोणबाट परिचित अनुहार चाहिन्छ भनेर नियोजित प्रचार वाजी गरिनु भनेको धरानको विकास र सम्वृद्धिलाई पछाडि धकेल्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
यदि त्यसो हो भने मेयरमा उम्मेद्धवार वन्ने नै हो त ?
सम्पुर्ण धरानवासीको चाहाना म प्रति ढल्किरहेको वुभ्mदछु । धरानको माटोले मलाई माग गरेकोले पार्टीले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्छ भन्ने निर्देशन भयो भने म तयार छु ।
धरानको समस्यालाई अहिलेको नेतृत्वले नेतृत्वजदायी भुमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने जन गुनासो वढी छ ? तपाई के भन्नु हुन्छ ?
वाहिर हल्ला भए जस्तो चाहिँ होइन । जनताको चाहना आँकाक्षा धेरै छन् । क्रमिक रुपमा गुनासोहरुको सम्वोधन भइहरेको छ । तर जादुको छडी जस्तो समस्याहरुको समाधान भएको चाहिँ छैन ।आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्नहरु भइरहेको छ ।
अवको नेतृत्वले आम धरानवासीको समस्यालाई कसरी समाधान गरेर अघि वढ्न् पर्छ ?
धरानको विद्यमान सवै प्रकारको समस्याहरुलाई सवै दलहरु,धराने जनताहरुसँग रचनात्मक सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्न सकियो भने समस्याहरुको न्यूनिकरण हुँदै जान्छ । म सवैलाई अपील गर्दछु, धरानको विकास र सम्वृद्धिको लागि एक आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि वढौं ।
नजिकै आइहरको चाडहरु बडा दशै,दिपावाली,छठको उपलक्ष्मयमा सवै धरानवासीलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यmत गर्न चाहन्छु । आउँदो उप –निर्वाचनमा नेकपालाई सधैं झंै तपाईहरुको विश्वास र मायाको अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।